Ny fampiharana tsara indrindra hisarihana Anime amin'ny Android | Androidsis
Anime dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo zavatra lanin'ny eran'izao tontolo izao noho ny andiany misy. Ny iray amin'ireo zavatra nitombo lanja tato ho ato dia ny fanondranana olona lehibe izay te hanana toerana misy azy ireo miaraka amin'ny zavatra noforoniny manokana, manan-danja amin'ny famoahana ny sangan'izy ireo manokana.
Manana ny maro ny Play Store fampiharana hisarihana Anime, ny fitaovana dia mety raha te-hanomboka hatrany am-boalohany ianao ary na dia te-hanao dingana amin'ny ambaratonga mandroso mandroso aza ianao. Raha manana finday fotsiny ianao, tablette na PC misy emulator dia ho afaka hamoaka an'io artista io ao aminao ianao.
1 DrawShow: mianatra manao sary anime
2 Manaova sary tsikelikely an'i Anime
3 WeDraw - Ahoana ny fanaovana sary Anime & Sariitatra
4 Ahoana ny fomba hanoritana sary ny Anime Ultra Instinct
5 iDraw: Fampianarana Anime & Hot hanoratanao Anime
6 Torolàlana momba ny sary anime Naruto
7 Mianara manao sary
8 Ahoana ny fanaovana sary Anime
9 Tutorial momba ny sary Anime
10 Anime sy manga Go manintona mahery fo Cartoon
DrawShow: mianatra manao sary anime
DrawShow dia fampiharana azo ampifanarahina amin'ny fitaovana finday, takelaka sy ny hafa, ao anatin'izany ny Windows, ahafahanao misintona ilay rindranasa, ary manahaka azy. Ny fampiharana dia hampiseho aminao ny tsipika rehetra hanaraka anao hanao ny sary tonga lafatra, fomba fanao tena ilaina raha te-hanomboka miaraka aminy ianao.
Maherin'ny zato no misy ireo fampianarana, ankoatry ny anime sy ny manga dia mifantoka amin'ny lohahevitra hafa, fa tsy izy irery no mihevitra azy rehetra ho tsara. Ireo fampianarana dia mifandraika amin'ny zavatra hafa toy ny sary hosodoko fiara, biby, endri-tsoratra, tranobe sy lohahevitra hafa toa ny sary.
Ny rindrambaiko dia manana zom-borona hanatsarana sy hivoahana amin'ireo faritra izay sintomina matetika, dia ahafahanao mamorona Gif mihetsika ary mitahiry azy ireo hizara azy ireo amin'ny tambajotra sosialy. Ny dokam-barotra dia misy dokam-barotra, saingy tsy mahasosotra mihitsy izany raha te hiasa miaraka amin'ny fampiharana ianao.
Inona no atao hoe anime sy doceo - DrawShow
Manaova sary tsikelikely an'i Anime
Fampiharana tsotra tonga lafatra io raha te hanomboka hatramin'ny voalohany mba hamoronana sary anime sy manga, nohazavaina tamin'ny antsipiriany daholo toa ny kilasy misy mpampianatra tsy miankina. Ny fanaovana sary tsikelikely an'i Anime amin'izao fotoana izao no tsara indrindra raha mbola vao manomboka ianao na raha mahay manamboatra sary.
Raha vantany vao manokatra ny fampiharana ianao, dia hahatonga anao handray ny dingana voalohany, anisan'izany ny fahafahany manintona ny loha, ny volo, ny akanjo, ny vatany ary ireo singa lehibe hafa amin'ny asa. Ny antsipiriany tsirairay dia tsy maintsy nohosorana mba ho tonga lafatra ny famaranana mba hanehoana azy, na amin'ny tambajotran-tserasera na amin'ny tontolo iasanao.
Ny lanjan'ilay fampiharana dia 2,9 megabytes eo ho eoAnkoatr'izay, ny fametrahana dia tsy mitaky fitahirizana sarotra raha hampiasa azy io amin'ny telefaona. Fitaovana mety indrindra raha te-hanomboka ianao, mandroso raha efa nanana traikefa tamin'ny taratasy sy pensilihazo ianao.
Manaova sary Anime tsikelikely
Developer: Fampiharana saka
WeDraw - Ahoana ny fanaovana sary Anime & Sariitatra
Izy io dia iray amin'ireo fampiharana izay tsy azonao adino raha te hanao sary anime sy sarimiaina ianao, anisan'izany ireo sary famantarana andian-dahatsary sy lalao video malaza be. Misy ny sarisary toa an'i Mario avy amin'ny Nintendo, Goku sy ireo namany avy ao amin'ny Dragon Ball, fa koa ireo hafa avy amin'ny andiany Naturo.
Ny rindranasa dia hampianatra anao hanoratanao ireo endri-tsoratra tianao indrindra, na manomboka eo am-boalohany, na eo amin'ny dingana mandroso na amin'izay heverina ho mandroso. Azonao atao ny misintona ireo tetik'asa raha tsy mila manana fifandraisana, mba hizarana azy ireo amin'ny tambajotra sosialy, WhatsApp, Telegram ary fitaovana hafa.
WeDraw - Ahoana ny fanaovana sary Anime & Sariitatra Rindrambaiko heverina ho fanabeazana izy io, hahafahanao manovo sary samihafa avy amin'ny pejy banga. Tena sarobidy ny fampiharana, 4,3 amin'ny isa 5 ny naoty ary manodidina ny iray tapitrisa izao ny fisintomana.
WeDraw - Ahoana no fanaovana sary Anime
Developer: Apps Artico
Ahoana ny fomba hanoritana sary ny Anime Ultra Instinct
Izy io dia fitaovana natao hanomezana aingam-panahy anao rehefa mamorona sary, toy izao ny fomba fampisehoana ny Drawing Anime Ultra Instinct, noforonin'i Zerojeck. Ao anatin'izany no ahitanao ireo tutorial hanoratanao ireo endri-tsoratra anime tianao indrindra, na avy amin'ny andian-dahatsary fanta-daza na avy amin'ny sasany tsy dia fahita firy any Espaina.
Tsy mampiasa Internet izy io, ankoatr'izany dia mazàna havaozina matetika miaraka amin'ny sary vaovao, ankoatry ny fampisehoana ny dingana tsikelikely ho lasa master of anime sy manga. Ho azonao ampiasaina koa izy io ho toy ny referansa rehefa manao sary anime ny fomba hafa ankoatr'izay tonga amin'ny toerana misy anao.
Hodiovina ny teknika, izay zava-dehibe rehefa dinihina nataon'ny manam-pahaizana ho toy ny toerana mamy ho an'ireo izay efa nianatra taloha. Ny fampiharana Ahoana no hanoratanao ny Anime Ultra Instinct dia mety ho an'ny vao manomboka sy olona afovoany amin'ny fanazavana ny asa atao isan'andro.
iDraw: Fampianarana Anime & Hot hanoratanao Anime
iDraw: Anime Tutorials & Hot to Draw Anime dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fampidirana tarehintsoratra marobe tianao, tsy misy tsy ampy amin'ny andiany Naruto, Dragon Ball ary andiany fanta-daza hafa. Ny zavatra voalohany dia ny manisy marika ireo zavatra voalohany, ny iray amin'izany dia ny manoritra ireo faritra manan-danja, toy ny loha, vatana ary ny antsipirian'ny fahitana.
Tsy miraika ireo fampianarana, na vao manomboka ianao na matihanina dia samy miala am-boalohany, fa afaka mandalo ny lesona ianao raha hitanao fa efa vitanao izany. Mazava sy madio ny interface, maha-iray amin'ireo tsotra noho ny fahitana teo aloha.
Alao an-tsaina ny fanaovana an'i Goku ho mpilalao fototra, azonao atao ny mamoaka ny singa lehibe tsirairay mba hahafahana mahita azy ho toy ny sary matihanina. Milanja manodidina ny 13 megabytes ny rindranasa, manodidina ny 100.000 ny fisintomana ary mety izany raha te-hanomboka na hanohy kilasy hamoahana ny lafiny tsara indrindra anananao ianao. Marina izany raha manana Android 4.4 na kinova vaovao ianao.
iDraw: Tutorials Anime & Ahoana ny fanaovana sary Anime
Developer: Ventures naverina amin'ny laoniny
Torolàlana momba ny sary anime Naruto
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo fampiharana natao hisarihana sary anime Naruto, satria manana ny toetran'ny andian-tantara tena ilaina izy io. Mora ny manao lesona, indrindra raha te-ho mpampianatra ianao ao anatin'ny telo herinandro mahery, fotoana omen'izy ireo hanoritana sary tonga lafatra.
Ny ilaina dia ravin-taratasy, pensilihazo ary famafana mba hanoritsoritana ireo sary izay matetika solontena sy tonga lafatra. Zava-dehibe ny lesonaNy tsirairay amin'izy ireo dia hamoaka ny tsara indrindra ao aminao, tsy maintsy mameno ny tsirairay isaky ny manomboka ny fampiharana ianao.
Ho an'ireo mpankafy ny andiany Naturo dia lavoraryRaha te hifantoka amin'ny Anime hafa ianao dia tsara kokoa ny manandrana ny iray na ny iray hafa izay misy angon-drakitra sary tsara. Ny zavatra tsara momba ny Instructions hanoratanao anime Naruto dia ny lanjany maivana, eo ambanin'ny 20 megabytes.
Torolàlana hanoratanao Naruto anime
Mianara sary fampiharana misy tutorial ho an'ny sary pensilihazoAnkoatr'izay, avelao ny tsirairay amin'izy ireo handeha amin'ny famolavolana ny fitaovana sy ny ivelan'io. Manampia mpilalao mahery fo mihoatra ny 50, malaza ny sasany ary ny sasany tsy dia manana tahiry manan-danja.
Mampiasa Internet fotsiny izy io handefasana ireo sary vaovao, raha tsy izany tsy mila izany izy satria iray amin'ireo fototra tsara indrindra raha manavao tsindraindray ianao. Ny fampiharana dia mahatratra 4,5 amin'ny isa 5 azo ataoMihoatra ny fisintomana an-tapitrisany ary ny interface dia iray amin'ireo mora ampiasaina indrindra.
Developer: Ianaro ho an'ny rehetra
Ahoana ny fanaovana sary Anime
Amin'ny fampiasana ny efijery telefaona dia hisintona ireo tarehimarika ianao ary ny drafitry ny endri-tsoratra anime, manomboka amin'ny fototra ary miafara amin'ny tetikasa mahaliana. Izy io dia mamorona ny sarisarinao voalohany, na mora na iray hafa sarotra kokoa izay mazàna avo lenta kokoa.
Ny tena ampiasaina amin'ny fampiharana dia pensilihazo, na hanombohana azy, avy eo manana paleta miloko misy loko an-jatony maro ianao, ankoatry ny tarehimarika hampiana ho azy. Ny isa dia 4,5 amin'ny isa 5, mihoatra ny 10.000 XNUMX alaina ary mety amin'ny fianarana voalohany.
Tutorial momba ny sary Anime
Ny fampianarana dia tonga lafatra hanombohana manomboka amin'ny tontolo iray Izay raha mahay manokatra elanelana amin'ny famoronana sary ianao. Amin'ity fampiharana ity dia hamaky ny famoronana endrika anime ianao, ho iray amin'ireo idealy hanombohana raha mbola tsy tapa-kevitra ianao amin'ny fanandramana ireo sarotra kokoa.
Lesona maro samy hafa, idealy satria asehon'izy ireo tsikelikely ary avelany hisarika anao rehefa mandeha ianao, mety raha manomboka amin'ny fototra ianao. Milanja manodidina ny 56 megabytes, zara raha mampiasa fahatsiarovana ary iray izay havaozina miaraka amina asa vaovao.
Anime sy manga Go manintona mahery fo Cartoon
Manana toerana tsara eto ireo mahery fo sarimiaina amin'ny alàlan'ny fananana karazany telo-polo mahery, anisan'izany ny andian-tantara efa fantatry ny rehetra. Network Apps & Games dia mandefa iray amin'ireo fampiharana tonga lafatra amin'ny faniriana hamolavola ny tarehin-tsoratra tsirairay amin'ny andiany samihafa, miaraka amin'ny dingana tsirairay ary mameno ny loko, ary koa afaka mizara azy ireo amin'ny tambajotra amin'ny tsindry iray monja.
Raha te hanana ny tsara indrindra avy aminao, dia mila mampiasa rantsan-tànana iray fotsiny ianao, satria mora ny manao ny endriny tsirairay amin'izy ireo. Na eo aza ny fanavaozana kely, Anime sy manga Go draw Cartoon mahery fo no mety ho an'ny karazana mpampiasa. Milanja 13 megabytes mahery ny lanjany.
Developer: Rindrambaiko sy lalao amin'ny tambajotra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana tsara indrindra hanaovana sary an'i Anime amin'ny Android
Ny fampiharana 8 tsara indrindra hianarana dihy hiphop